Khubaza ukuqala ngokuzenzekelayo kwe-OneDrive
ikhaya/11 Windows/Khubaza ukuqala ngokuzenzekelayo kwe-OneDrive
Vangelis8. October 2021
Inkonzo kaMicrosoft yokugcina ilifu ye-OneDrive idityaniswa ngokuzenzekelayo xa Windows 11 ifakiwe. I-OneDrive igcina kwaye ingqamanisa idatha yakho kwaye iluncedo xa ufuna ukugcina iifayile. Kule miyalelo siza kukubonisa indlela yokuthintela i-OneDrive ukuba iqalise ngokuzenzekelayo ngayo Windows 11.
Cima ukuqala ngokuzenzekelayo
Ngokuzenzekelayo, iWindows 11 iqwalaselwe ukuvumela Inkonzo yokugcina yelifu ye-OneDrive ngalo lonke ixesha uqala ikhompyuter yakho. Ukuba awuyifuni loo nto, siza kukubonisa le miyalelo ngamanyathelo ngendlela yokukhubaza iMicrosoft OneDrive ukuqala ngokuzenzekelayo kwikhompyuter yakho yeWindows 11 xa inkqubo iqala.
Ungasicima njani isiqalo esizenzekelayo se-OneDrive
Cofa ekunene kwi I icon ye-OneDrive Kwitreyi yenkqubo.
Kwimenyu evuliweyo cofa apha izilungiselelo.
Ukhetha ntoni kuseto olutsha lwefestile kwaye ususe uphawu lokutshekisha ecaleni kwe "Qala i-OneDrive ngokuzenzekelayo xa ungena kwiWindows ".
Ngokucofa ku-Kulungile useto luyagcinwa kwaye OneDrive ayiqali ngenkqubo elandelayo.
Windows 11 buyela kwiWindows 10 - nantsi indlela
Ukuseta imonitha yesibini phantsi Windows 11
Cima iifayile zexeshana Windows 11 - 3 iindlela
Windows 11: Qamba igama kwakhona “Le PC”
Sebenzisa Windows 11 Ikhaya ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft
Ikhibhodi yomphezulu ayisebenzi-iingcebiso ezi-6 zokunceda
Iindlela ezi-4 zokukhupha iinkqubo zokusebenza kwiWindows 11
Windows 11: Susa ii-icon zokukhangela, ii-Aplikheshini eziSebenzayo, iiWidgets, Ncokola, kwibar yomsebenzi
Windows 11: Ukusetyenziswa kwebhetri kubonisiwe usetyenziso ngalunye
Uwutshintsha njani umhla kunye neWindows 11
NdinguVangelis, umnini kunye nomlawuli weewindowspower.de Ndingumntu othanda iWindows kwaye ndakhe windowspower.de kunye neqela lam kule minyaka imbalwa idlulileyo. Sisebenza rhoqo ukubonelela ngezisombululo zazo zonke iingxaki ezinokubakho zeWindows. Ndonwabe kakhulu ukuba iingcebiso zethu kunye namacebo kwi windowspower.de ziyakunceda.
Windows 10 Iingcebiso zokwenza ubuChule kwiiVidiyo. Ngaba ufuna Windows 10 iingcebiso kunye namacebo? Unathi uya kufumana imiyalelo eluncedo, izifundo zevidiyo kunye nolwazi oluncedo ukulungiselela iiWindows zakho.
Njengamaqabane eAmazon, sifumana kwintengiso efanelekileyo ukuba ucofa kwikhonkco elihambelanayo leAmazon.
© iifestile.de 2021
Sisebenzisa ikuki kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zazo zibalulekile, ngelixa ezinye zisinceda ukuphucula le webhusayithi kunye namava akho.
Iisetingi zebhokisi yeekuki Qalisa
Gqiba ukuba zeziphi iikuki ofuna ukuzivumela. Apha uya kufumana isishwankathelo sazo zonke iikuki ezisetyenzisiweyo.
Ngesilayida unokuvula okanye uvale iintlobo ezahlukeneyo zeekuki:
Le webhusayithi iya:
Kubalulekile: Khumbula useto lwemvume yekuki
Kubalulekile: Vumela iikuki zeseshoni
Kubalulekile: Qokelela ulwazi olufaka kwiifomu zoqhagamshelwano, incwadana yeendaba, kunye nezinye iifomu kuwo onke amaphepha
Kubalulekile: Gcina umkhondo wento oyifaka kwinqwelo yokuthenga
Kubalulekile: Qinisekisa ukuba ungenile kwiakhawunti yakho yomsebenzisi
Okubalulekileyo: Bhala inguqulelo yolwimi olukhethileyo
Le webhusayithi ayiyi:
Yenza inqaku ledatha yakho yokungena
Ukusebenza: Khumbula iisetingi zemidiya yoluntu
Ukusebenza: Khumbula ummandla kunye nelizwe elikhethiweyo
Uhlalutyo: Gcina iliso kumaphepha owandwendwelayo kunye nokunxibelelana
Uhlalutyo: Khangela indawo okuyo kunye nommandla ngokusekelwe kwinombolo yakho ye-IP. Uhlalutyo: Khangela ixesha elichithwe kwiphepha ngalinye. Uhlalutyo: Yandisa umgangatho wedatha yemisebenzi yamanani
Intengiso: Lungisa ulwazi kunye neentengiso ezisekelwe kwizinto onomdla kuzo, umz. umxholo owundwendwele ngaphambili. (Okwangoku asisebenzisi iikuki ekujoliswe kuzo okanye ukujolisa. Intengiso: Qokelela ulwazi olunokuchazwa njengegama kunye nendawo
Kubalulekile: Qokelela ulwazi olufakileyo kwiifomu zoqhagamshelwano, incwadana yeendaba kunye nezinye iifomu kuwo onke amaphepha
Kubalulekile: Gcina umkhondo wento oyifakileyo kwinqwelo yokuthenga
Kubalulekile: Khumbula inguqulelo yolwimi oyikhethileyo
Uhlalutyo: Gcina umkhondo wamaphepha akho andwendwelwe kunye nonxibelelwano oluthathiweyo
Uhlalutyo: Gcina umkhondo malunga nendawo yakho kunye nommandla ngokusekelwe kwinombolo yakho ye-IP
Uhlalutyo: Gcina umkhondo wexesha elichithwe kwiphepha ngalinye
Uhlalutyo: Yandisa umgangatho wedatha yemisebenzi yezibalo
Intengiso: Sebenzisa ulwazi lwentengiso eyenziweyo nomntu wesithathu
Intengiso: Ikuvumela ukuba uqhagamshele kwiiwebhusayithi zentlalo
Intengiso: Chonga isixhobo osisebenzisayo
Intengiso: Qokelela ulwazi olunokuchazwa njengegama kunye nendawo
Intengiso: Sebenzisa ulwazi olulungiselelwe intengiso nomntu wesithathu
Intengiso: Ikuvumela ukuba uqhagamshele kwiisayithi zentlalol Intengiso: Chonga isixhobo osisebenzisayo